Cheap Industrial Double Double ịghasa Composting Turner Machine N'ihi gbaa ụka Suppliers na Factory | YiZheng
Gịnị bụ Ugboro abụọ ịghasa Composting Turner Machine?
Ọgbọ ọhụrụ nke Ugboro abụọ ịghasa Composting Turner Machine emeziwanye okpukpu abụọ nke ntụgharị ntụgharị, n'ihi ya, ọ nwere ọrụ nke ịtụgharị, ịgwakọta na ikuku oxygenation, na-eme ka ọnụego gbaa ụka, na-ere ngwa ngwa, na-egbochi ọdịdị ísì, na-echekwa ike oriri nke ikuku oxygen, na-ebelata oge gbaa ụka. Ntughari omimi nke akụrụngwa a nwere ike iru mita 1.7 na ntụgharị ntụgharị dị irè nwere ike iru mita 6-11.
Iji Ugboro abụọ ịghasa Composting Turner Machine
(1) Ugboro abụọ ịghasa Composting Turner Machine A na-ejikarị ya eme ihe na gbaa ụka na ọrụ mwepụ mmiri dịka osisi fatịlaịza organic, osisi fatịlaịza,
(2) Karịsịa nke kwesịrị ekwesị maka ịgba ụka nke ihe ndị dị ala dị ka sludge na mkpofu obodo (n'ihi obere ihe dị n'ime ala, a ghaghị inye omimi gbaa ụka iji meziwanye okpomọkụ gbaa ụka, si otú a na-ebelata oge gbaa ụka).
(3) Mee kọntaktị zuru oke n'etiti ihe na oxygen na ikuku, ka ị wee rụọ ọrụ dị mkpa nke fermentation aerobic.
Jikwaa Isi Ihe nke postkọwa
1. Iwu nke carbon-nitrogen ruru (C / N). C / N kwesịrị ekwesị maka ire ere nke ihe ndị ọzọ site na microorganisms izugbe bụ ihe dị ka 25: 1.
2. Njikwa mmiri. Mmiri compost na mmepụta n'ezie na-achịkwa ya na 50% -65%.
3. Njikwa ikuku ventila. Oxygen ọkọnọ bụ ihe dị mkpa maka ịga nke ọma nke compost. Ekwenyere n'ozuzu ya na ikuku oxygen dị na ikpo ahihia kwesịrị ekwesị maka 8% ~ 18%.
4. Njikwa okpomọkụ. Okpomọkụ bụ ihe dị mkpa na-emetụta ọrụ nke microorganisms nke compost. Ihe gbaa ụka dị elu na-adịkarị n'etiti 50-65 Celsius C.
5. Njikwa PH. PH bụ ihe dị mkpa na-emetụta uto nke microorganisms. PH kacha mma kwesịrị ịbụ 6-9.
6. Njikwa isi uto. Ka ọ dị ugbu a, a na-eji microorganisms eme ihe ọzọ.
Uru nke Ugboro abụọ ịghasa Composting Turner Machine
(1) gbaa ụka uzo nke nwere ike na-aghọta ọrụ nke otu igwe na otutu grooves nwere ike atara nọgidere ma ọ bụ na ogbe.
(2) Ngbanye aka gbaa ụka, arụ ọrụ siri ike, siri ike ma dịgide, mgbanwe edo edo.
(3) Adabara aerobic gbaa ụka nwere ike iji na njikọ na anyanwụ gbaa ụka ụlọ na shifters.
Ugboro abụọ ịghasa Composting Turner Machine Video Display
Ugboro abụọ ịghasa Composting Turner Machine Model Nhọrọ
Na-akpụ akpụ Motor
Ije ije Motor
Hydraulic mgbapụta Motor
Nke gara aga: Wheel Type Composting Turner Machine
Osote: Vetikal Fermentation tank